Madheshvani : The voice of Madhesh - राजपाले सरकारमा ‘जान्न’ भन्नु नै जान खोज्नु हो : डा.सुरेन्द्र लाभ
२०७६ साल माघ १७ गते शुक्रबार
० विगतमा राजपा र नेकपा विपरीत धारका देखिएको थियो तर अहिले उनीहरूबीच बढ्दै गएको सहकार्य र सामिप्यतालाई कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
— नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा मात्रै धार हो, त्यो हो कुर्सी, सत्ता वा स्वार्थ । त्यसैले यी सबै दल एउटै धारका छन् भन्ने कुरालाई विगत केही दिनका घटनाहरूले एकचोटि फेरि प्रमाणित गरेको छ । यिनीहरूको नाम, इतिहास, भूगोल फरक होला तर सबै स्वार्थको धार नै हो ।
० भनेपछि आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिक दलहरूले जोसँग र जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्छन् ?
— हो, अहिलेसम्म त्यहि देखिएको हो । जतिबेलादेखि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो त्यतिबेलादेखिको इतिहासै यहि हो । सजिलोका लागि यिनीहरूले सिद्धान्तको प्रतिउत्पादन गर्छन् । उनीहरूको दृष्टिमा त्यो सिद्धान्त भनेको राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु हुँदैन, जोसँग पनि मित्रता हुनसक्छ । किनभने भविष्यमा साँठगाँठ गर्नुछ, सत्ता प्राप्ति गर्नुछ । वास्तविकता के हो भने सत्तालोलुप र सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने चरित्र नेपाली राजनीतिमा छ भन्ने कुरा पुनः प्रमाणित भएको छ ।
० मधेशको राजनीति कतातिर जाँदैछ ?
— मधेशको राजनीति अहिले दिशाहीन भइसकेको छ । सत्ताकै लागि विगतमा मधेशी दलहरूले एमालेमुक्त अभियान लगायतका नाराहरू लगाउने गरेका थिए । त्यसमा सबभन्दा बढी चर्को नारा जसको थियो, अहिले त्यसैको बढी निकटता छ सत्ताधारीसँग । किनभने जसले चर्को नारा दिइरहेका थिए, जसलाई मधेशको ओली भनिन्थ्यो, उसले धनुषाबाट कसको सहयोगबाट चुनाव जितेका हुन भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ । जसलाई विरोध गरिएको थियो, उसैको सहयोगबाट निर्वाचन जितिएको हो त्यसैले, कसैसँग इमान्दारी वा नैतिक बल केही छैन ।
० मधेशमा वैकल्पिक शक्ति आउने सम्भावना कति छ ?
— मधेशमा अहिले भ्याकुमको अवस्था छ । प्रकृतिको पनि नियम हो, भ्याकुम हुन्छ त्यहाँ आँधीबेहरी आउने संकेत हो । मधेशको पनि यहि स्थिति छ । जुन दलहरू सत्तालिप्सामा लागिरहेका छन्, त्यसै दलभित्र पनि युवाहरूमा असन्तुष्टि छ । के गरूँ, न गरूँ भन्ने अन्योलता छ र आम जनताको बीच थुप्रै प्रश्नवाचक चिन्हहरू खडा भएका छन् । यसले भविष्यमा एउटा ठूलो आँधीबेहरीको सम्भावनालाई देखाइरहेको छ । त्यो आँधीबेहरीबाट नयाँ नेतृत्व, नयाँ व्यक्ति स्थापित हुने र पुरानाहरू विस्थापित हुने सम्भावना त्यतिकै बढेको छ ।
० भनेपछि मधेशमा फेरि आन्दोलनको माहौल बन्दै गएको छ ।
— निश्चितरूपमा । अहिले सतहमा देखा परिरहेको छैन तर यो भ्याकुमको अवस्थाले संकेत गरिरहेको छ । हरेक पार्टीमा केही इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरू छन् । कुनै न कुनै नाउँमा आन्दोलन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । अबको दिनमा युवाहरूको हातमा नेतृत्व जान सक्छ ।
० राष्ट्रियसभा चुनावमा नेकपा र राजपाको गठबन्धनले विजय हासिल ग¥यो, योसँगै प्रदेश २ मा पनि सरकार परिवर्तन हुने चर्चा चल्दैछ, कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?
— राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरू जितेका छन् भने दलहरू हारेका छन् । पानी बाराबारको जुन अवस्था थियो, त्यसमा गठबन्धन गरेर जितेका छन् । किनभने दलहरूमा अब नैतिक बल रहेन । प्रदेश २ मा नयाँ सत्ता समीकरणका संकेतहरू त देखा परेका छन् । सभामुख निर्वाचनमा राजपाले लिखितरूपमा समर्थन गरेको थियो । अर्को कुरा राष्ट्रिय सभामा जीत भइसकेपछि जुन विजय जुलुस निस्कियो त्यसमा नारा थियो नेकपा–राजपा जिन्दावाद । त्यसले गर्दा प्रष्टरूपमा देखिएको छ कि प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन्छ । बाहिर यिनीहरूले भनिरहेका छन् कि राजपा संघीय सरकारमा जाँदैन । तर, भन्नु एउटा र गर्नु अर्को यिनीहरूको राजनीतिक चरित्र नै हो । सार्वजनिकरूपमा शीर्ष नेताहरूले भन्छन् कि सत्तामा जाँदैनौं यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि यिनीहरू सत्तामा जान खुट्टा उचालिसकेका छन् ।
० यदि प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाको सरकार बन्यो भने जनादेशमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ ?
— प्रदेश २ मा राजपा र समाजवादीको पक्षमा जनादेश आएको थियो । दुवै पार्टीले संयुक्तरूपमा उम्मेदवारी दिएका थिए र जिते पनि । अहिले प्रदेश २ मा संख्याको हिसावले सबभन्दा ठूलो दल नेकपा नै छ । यदि यी नेकपा र राजपा मिल्यो भने समाजवादी अल्पमतमा पर्छ । गणितीय हिसावमा यिनीहरूले सरकार बनाउन सक्छ ।
० राजपा र समाजवादीबीच लामो समयदेखि एकताको चर्चा हुँदै आएको छ, यो चर्चा पछाडि के कारण छ ?
— यी दुई दलबीच एकीकरणको चर्चा नाटक हो । प्रदेश २ मा समाजवादी र राजपाबीच जुन साँठगाँठ भयो त्यो बाध्यता थियो, जनताको दबाब थियो । तर, यिनीहरूको स्वभाव, चरित्रगतरूपमै भिन्नता छ तर सिद्धान्ततः भिन्नता छैन । यिनीहरूबीच ठूलो व्यक्तिगत लडाई छ । एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने अवस्था देखिरहेको छैन । त्यसैले राजपा र समाजवादीबीच एकीकरण हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । एकीकरणको चर्चा नाटक मात्र थियो । ६ वटा पार्टी मिलेर जुन राजपा बनेको छ, त्यसमा एकता छैन भने अन्य दलसँग एकता हुने कुरा त परै जाओस् । समाजवादीभित्र पनि तीनवटा खेमा देखिएको छ । यिनीहरू एक ठाउँमा हुने बित्तिकै मन पनि मिलिहाल्छ भन्ने छैन । संविधानले थ्रेसहोल्ड बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना ग¥यो जसले गर्दा एक ठाउँमा बसिरहेका छन् ।
० नेकपासँग राजपाको आगामी यात्रा कस्तो रहला ?
— अब यिनीहरू विस्तारै सत्तामा जान्छन्, केन्द्रमा पनि मन्त्री बन्छन् । सरकारमा हुँदा संविधान संशोधनको कुरा पनि गरिहालौं जस्ता कुराहरू हुन्छन् । संविधान संशोधनको सम्भावना छ, मधेशका अन्य मुद्दाहरूको सम्बोधन हुने आश गर्न सकिन्छ । यिनीहरू इमान्दार प्रयास गरे हुन सक्छ । तर सबै सत्तालिप्सामा फसिरहेका छन् । केही दिनसम्म यिनीहरूको सहयात्रा अगाडि बढ्छ । केही दिनपछि फेरि अर्को चुनाव आउँछ, फेरि नयाँ समीकरण हुन्छ । त्यसले गर्दा आम जनतामा राजनीतिक वितृष्णा आउने कारण पनि यहि नै हो । यस्तै चलिरहेको छ । सबैको आआफ्नो पसल जस्तो छ, जनतासँग कुनै लेनादेना छैन । सधैं जनताले चुनावमा आफ्नो मत दिन्छ, रगत बगाउँछ तर फाइदामा नेताहरू हुन्छन् । यो कुरा आमजनताले अनुभव गरिरहेका छन् ।
० राजपा आफ्नो मुद्दाबाट पछाडि हट्न लागेको हो कि ?
— मुद्दाबाट त पछाडि हट्दैन, त्यसलाई रटिरहन्छ । यदि राजपा सत्तामा गइहाल्यो भने फुट्न सक्छ ।
० उपसभामुखमा राजपाले पाउने चर्चा पनि छ नि ?
— अब त प्रष्टै छ राजपाले उपसभामुख पाउने भयो । त्यसले अलिकति मख्ख पनि छ, खुशियाली पनि छाएको छ ।
० नेपालमा अहिले इतिहासकै शक्तिशाली सरकार छ, तर प्रतिफल आइरहेको छैन । यस्तो बहुमतको सरकारले पनि काम गर्न नसक्दा अब नेपालमा कस्तो सरकार चाहिन्छ ?
— यो एउटा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । त्यत्रो बहुमत, यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । सेवा प्रवाहमा सबभन्दा ठूलो समस्या देखा परिरहेको छ । यो चिन्ता र विश्लेषणको विषय पनि हो । जबसम्म नेतृत्वमा दृढता हुँदैन, काम गर्ने वातावरण हुँदैन र काम गर्ने हिम्मत हुँदैन भने काम त हुँदैन । वास्तविकता हो कि जुन किसिमले यो सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो किसिमले काम भइरहेको छैन । आमजनतामा नैराश्यता छाएको छ ।
० यो सरकारले राम्ररी काम गर्न नसक्नुका कारण के देख्नुहुन्छ ?
— सबभन्दा पहिला त नेकपाभित्र पनि गुटबन्दी छन्, राजनीतिक भागवण्डा छ । जसले गर्दा यो सरकारले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीमा भिजन छैन भन्न त गाह्रो छ । किनभने उहाँ जतिबेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला राम्रै काम गर्नुभएको थियो । उहाँको राजनीतिक यात्रा लामो छ । उहाँले नबुझेको होला भन्ने कुरा पत्याउन त गाह्रो छ ।